Ampidino Cyber Dust ho an'ny Windows
Ampidino Cyber Dust
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (18.00 MB)
Ampidino Cyber Dust, Cyber ​​Dust dia fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo miaraka aminny rafitra toa ani Snapchat izay afaka mamafa hafatra avy hatrany. Cyber ​​Dust dia manome famafana mandeha ho azy ny hafatrao aorianny fotoana voafaritra rehefa miresaka aminny namana na olona erakizao tontolo izao ianao, ary fampiharana azo ampiasaina aminny finday ary koa takelaka sy solosaina Windows 10. fampiharana izany izay manana rafitra mitovy aminny Snapchat izay mamela anao handefa hafatra.
Ny fampiharana fandefasan-kafatra maimaim-poana, izay miavaka aminny fitovizany aminny Snapchat, dia mamafa ny azy avy hatrany aorianny 30 segondra. Aminizay dia tsy mila misahirana mamafa ny hafatra ianao rehefa avy miresaka. Mazava ho azy, raha misy olona liana te hamaky ny hafatrao dia ho diso fanantenana izy.Ny fampiharana Cyber ​​Dust, izay azonao ampiasaina aminny famoronana ny maha-mpikambana anao maimaim-poana, dia manala ampahany aminny fahafaha-maka ny pikantsarinny hafatra.
Rehefa mandray pikantsary ilay olona mandray ny hafatra dia mahazo fampandrenesana eo noho eo ianao. Ao aminny efijery fampandrenesana dia tsy aseho ny mpandefa sy mpandray ny hafatra. Cyber ​​Dust, izay nanjary fenitra aminny fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo, dia misy safidy hanampiana emoji, sticker, sary ary horonan-tsary, azonao atao ny mandefa hafatra aminny fomba samihafa.
Manana safidy iray aminny iray, vondrona (fetra olona 100 be indrindra) ianao na safidinny hafatra betsaka.Ao aminny efijery fampandrenesana dia tsy aseho ilay mpandefa sy mpandray ny hafatra. Cyber ​​Dust, izay nanjary fenitra aminny fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo, dia misy safidy hanampiana emoji, sticker, sary ary horonan-tsary, azonao atao ny mandefa hafatra aminny fomba samihafa. Manana safidy iray aminny iray, vondrona (fetra olona 100 be indrindra) ianao na safidinny hafatra betsaka.Ao aminny efijery fampandrenesana dia tsy aseho ilay mpandefa sy mpandray ny hafatra.
Cyber ​​Dust, izay nanjary fenitra aminny fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo, dia misy safidy hanampiana emoji, sticker, sary ary horonan-tsary, azonao atao ny mandefa hafatra aminny fomba samihafa. Manana safidy iray aminny iray, vondrona (fetra olona 100 be indrindra) ianao na safidinny hafatra betsaka.
Haben'ny rakitra: 18.00 MB